Sidee looga saaraa sumadda markasta oo la isticmaalayo Prisma | Wararka IPhone
Prism wuxuu noqday mid ka mid ah codsiyada ugu caansan App Store, iyadoo ogolaansho laga helay Pokémon Go dabcan. Tifatirahaan cajiibka ah waxaa horey noogula taliyay saaxiibkeen Jordi oo ka socda SoyDeMac. Si kastaba ha noqotee, waxay leedahay shaqo aysan isticmaaleyaal badani jeclayn, waana taas oo ay ku hirgelinayso calaamadeynta dhammaan sawirradeenna oo lagu tifaftiray Prisma. Laakiin tani waxay leedahay xal fudud, maanta waxaan ku baraynaa sida looga saaro astaanta markasta oo la isticmaalayo Prisma si sawiradaadu u noqdaan sidaad rabto, adigoon u baahnayn inaad xayeysiiso arjiga.
Ugu horreyntii, kuwa aan aqoon Prisma, waxaan u soo bandhigi doonnaa: Codsigan wuxuu kuu oggolaanayaa inaad sawirradaada u rogto shaqooyin farshaxan oo run ah, oo aad u tiro badan oo miirayaal ah, sawirro sawir leh iyo wixii ka sarreeya, adeegsi fudud oo dhakhso leh. taas ayaa noo oggolaan doonta inaan ku abuurno shaqooyin isku-dhafan dhowr dhaqdhaqaaq oo fudud. Tifaftirayaasha sawirradan ayaa si aad ah u soo kordhaya. Hada wuxuu kujiraa booska nambarka toddobaad ee shaxda bilaashka ah ee App Store, halkaasna waxaa ku jirtay muddo bil ah oo leh qiyaastii qiyaastii 4,5 xiddigood.
Ka saar calaamadaha astaamaha Prisma
Aad uga fudud intaad qiyaasi kartid, laakiin dalabku wuxuu gebi ahaanba ku qoran yahay Ingiriis inkasta oo uu sidoo kale ku guuleystay Spain. Waxaan gujineynaa qalabka hoose si aan u aadno goobaha oo waxaan arki doonaa seddex badhan. Midkood ayaa ku qoran «Daar Watermarks«, Kaas oo sida ugu dhaqsaha badan loo hawlgelin doono, haddii aan barkinta ka dhigno, calaamadeynta ayaa baaba'aysa marka la keydinayo sawiradeenna oo lagu soo hagaajiyay Prisma. Waa run inay umuuqato doqonnimo, laakiin adeegsadayaal badan ma jecla astaanta gabi ahaanba oo waxay joojinayaan adeegsiga arjiga, ama goor dambe ayey u jareen si waafaqsan. Mar dambe qaadin tallaabooyinkan, waad ogtahay sida loo baabi'iyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida looga saaro astaanta calaamadeynta markii la isticmaalayo Prisma
Mahadsanid. Waan fidiyey oo way fududahay.
Kuwani waa sawirradii ugu horreeyay ee 2-inch iPad Pro 12.9?